I-China 30ml (1oz) I-Amber Glass Boston Bottle ene-Dropper Set- yeeoyile ezifunekayo, i-Perfume okanye umzi-mveliso we-Fragrance kunye nabaxhasi | IHoyer
Ibhotile yeglasi yokunyamekela
Imbiza yekrimu yezithambiso
Ibhotile yamayeza eglasi
Ibhotile yeoyile ebaluleke kakhulu
Ibhotile ye wayini yeglasi
Ibhotile yeewayini ebomvu
Ibhotile yetyiwa kunye nepepile
Ibhotile yesiselo seglasi
I-30ml (1oz) I-Amber Glass Boston Bottle eneDropper Iseti- yeoyile efunekayo, i-Perfume okanye iziqholo
Unokukhetha ukusebenzisa iseti yedrophu okanye isiciko sebhakabhaka ngokufakelwa kweplastiki kule bhotile. Ukuba iseti ye-dropper, unokuba nokukhetha uhlobo lwe-pipette, umbala yerabha. Kukho iintlobo ezi-3 ze-pipette kwaye samkela nayiphi na imibala yerabha njengemfuno yakho, thumela nje uphando.
Umthamo: 30ml / 1 oz
Ubunzima: 44g / 0.05 iphawundi
Ukuphakama: 78mm / 3.07 intshi
Ububanzi: I-33mm / 1,3 intshi
Umbala: Luhlaza okwesibhakabhaka, ngokucacileyo, i-amber okanye ukupenda komnye umbala kuyamkeleka
I-MOQ: I-10,000pcs, ubuncinci obuncinci buyamkeleka ukuba sisitokhwe
Iglasi ye-amber eqinileyo eneseti esehla, egcwalisayo, ukhuseleko lwe-UV, kulula ukuyicoca, uhlobo lwesikere.
Iglasi ye-amber eyomeleleyo inokuzikhusela kulwelo olunobuthathaka obuthathaka njengevumba okanye ioyile eyimfuneko ngokugqibeleleyo ngohlobo lokukhusela i-UV, kwaye luhlobo lomzimba omncinci yenza kube lula kakhulu ukuluthwala kunye nendawo. Ipipette yenziwe ngeglasi yodidi lokutya, ngenxa yoko akuyomfuneko ukuba ukhathazeke ngokhuseleko okanye ukudibana neoyile kwibhotile. Iya kuba sempilweni kakhulu kwaye iphephe xa usebenzisa le seti yebhotile.
Ukusetyenziswa okuhlukeneyo: le setha eyi-dropper elungileyo lukhetho olukhulu kwi-oli yasekhaya, ivumba elimnandi okanye ifreshener yomoya, awusoze uzisole ngokukhetha.
Ukuphinda uzalise: Emva kokuba ulwelo lusetyenzisiwe ngaphandle, unokugcwalisa naluphi na ulwelo oluthandayo, kodwa ngenxa yolwelo olukhethekileyo, nceda ugcine kude kubantwana abangaphantsi kweminyaka emi-6. Okanye usebenzise phantsi kweliso lomntu omdala.
Ubungakanani Umthamo: 30 ml Ubunzima: 44 g Umphakamo: 78 mm ububanzi: 33 mm Umthamo: Ubunzima be-1oz: i-0,05 yeepawundi Ukuphakama: I-intshi ezi-3.07 ubukhulu: ii-intshi ezi-1,2
Umbala i-amber Ukuprinta okanye eminye imibala (ecacileyo, eluhlaza okwesibhakabhaka) yamkelekile
I-MOQ I-10,000pcs Inani elincinci liyamkeleka ukuba sinesitokhwe
Ukulungiswa kweposi Ukupeyinta, i-decal, isikrini se-silika, ukupeyinta kweprinta, ukufrasha, ukunyathela igolide, ukubeka isilivere njl.I-logo egcizelelekileyo, uyilo lwe-OEM luyafumaneka.
Iphakheji I-Carton, ipallet okanye ngokwemfuneko yakho
Umzekelo a. iisampulu esitokhweni:QTY: 1-5pcsIindleko: zinikezwe ngokukhululekileyo
Izinto zokuhamba: qokelela
Ixesha: Iintsuku ezi-3-5
b. iisampuli ezenziwe ngokwezifiso:QTY: ngokwemfuno yakho Ixabiso: ngokwendlela ethile yoyilo kunye nemveliso
Ixesha: ngokwendlela ethile
Ixabiso Ixabiso nje lesalathiso sakho, linokutshintshwa ngenani okanye ngokwemfuno yakho ethile. Kwakhona ukuba ufuna izixhobo ezinxulumene noko nceda ubuze kuthi, siya kubonelela ngenkonzo yethu entle kakhulu.
IPOD I-Qingdao / i-Lianyungang / iShanghai
Edlulileyo: I-16oz 500ml i-Amber Glass yeBoston ibhotile enepampu emnyama
Okulandelayo: I-16 oz 500ml Cobalt Blue Glass Boston Bottle ngePump Plump
ibhotile yeoyile efanelekileyo
kwibhotile yeoli efanelekileyo
iibhotile zeoyile ezifanelekileyo
ibhotile efanelekileyo yeoli
iibhotile ezisampulu zeoyile
I-10ml I-Glass ye-Glass kwi-Bottle ene-Stainless ...
Umgangatho wePrimiyamu ye-30ml 1oz Amber Glass ibalulekile ...
I-10ml Cobalt Blue Glass Roll kwiBhotile nge-Stai ...
Idilesi:Igumbi 1106, Kumgangatho we-11 (kwiYunivesithi iXuzhou College Venture Park), uNo.271, Indlela yeQingnian, iSithili saseYunlong, kwiXuzhou
Inombolo kanomyayi:+ 86-18552912301
Ifowuni:+ 86- (0) 516-83669687